जहाँ आफ्नै बाबुसँग गराइन्छ छोरीको बिहे ! – Janamukhi.com
जनमुखी संबाददाता १४ कार्तिक २०७६, बिहीबार
A bride covers her face as she waits to take her wedding vow atamass marriage ceremony at Bahirkhand village, north of Kolkata February 8, 2015. A total of 108 tribal Muslim and Hindu couples from various villages across the state took their wedding vows on Sunday during the day-long mass marriage ceremony organised byasocial organisation, the organisers said. REUTERS/Rupak De Chowdhuri (INDIA - Tags: SOCIETY) - GM1EB281OXL01
कार्तिक १४, विश्वमा अनेक जातजाती तथा समुदाय छन् । उनीहरुका आ–आफ्नो चलन तथा रीतिरिवाज पनि छन् । सुन्दा पत्याउनै नसकिने कुरीतिहरु अझै प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । केही विस्थापन भए पनि केही प्रचलनलाई भने त्यस्ता समुदायले मान्दै आएका छन् ।
सिरहामा ब्राउसुगर सहित चार जना पक्राउ
‘भीआईपी जुवाडे’विरुद्ध अनुसन्धान गर्न ७ दिनको म्याद थप
२२ वर्ष पुरानो रेकर्ड तोड्दै ८ वर्षका बालकले समाते ३१४ किलोको शार्क